It is me. Ko Niknayman.: လူမဆန်တဲ့.ရက်စက်မှုများ.မေ့အားရက်စရာလား.
ဤ Video file ကိုလိုချင်ပါက ဒီမှာ download လုပ်ပါ။ အစပိုင်းတွင်.Still ရှိသောကြောင့်စိတ်ရှည်စွာအနည်း ငယ်စောင့် ပေးပါ။ လာပါလိမ့်မည်။
Posted by Ko Niknayman at 8:49 AM